Ungangincoma yini ezinye izindawo ezinhle zokuhlukanisa iphrofayli yami ephezulu ye-PR yama-backlink?
Yiqiniso, ukuthola izixhumanisi ezivela kumandla aphakeme nemithombo ephezulu ye-PageRank njengamaphephandaba kazwelonke noma ama-ejensi ezindaba zomhlaba jikelele akufanele nanini akhishwe. Kuyindlela enhle yokuvuselela iphrofayili yakho ye-PR ephezulu ye-website noma yebhulogi, kodwa umsebenzi uyaziwa njengokwenza isikhathi esiningi nokusebenza kanzima. Noma kunjalo, ngokucatshangelwa okuncane engqondweni, ungakwazi kalula ukuthatha izinkomba zangasese ezengeziwe ukuze uthuthukise iphrofayli yakho ephezulu ye-PR ekhona kakade.Yini okungaphezulu - mhlawumbe usuvele uthola okunye okushicilelwe kokuqukethwe kwekhwalithi noma othintana nabo abathintekayo abadingekayo kulokho. Ngezansi ngizokukhombisa izindawo ezimbalwa nezindawo ezifanele ukucabangela ukuxhumana nazo. Ngempela, lokho kuyoba ithuba elihle lokuxhunyaniswa namanye amawebhusayithi wezemfundo / ohulumeni abethembekile nakakhulu. Noma kunjalo, zombili izigaba ngeke zidinge izindleko ezinkulu zebhajethi noma isikhathi esiningi kakhulu. Yiqiniso, uma kusetshenziswe kwesokudla.
Amasayithi oHulumeni basekhaya
Phakathi kwezinye, amawebhusayithi aphakathi nendawo kazwelonke noma amabhulogi asekelayo anezakhi zegama le-GOV yilezo zimithombo ezincane ekugcineni I-DA ephakeme (i-domain authority) score ishaya amaphuzu angu-100 ngokugcwele. Uma sicabanga ukuthi umuntu akanakuphumelela ekuthuthukiseni iphrofayili ephezulu ye-backlink ne-one evela kusizinda sikahulumeni esiyinhloko, kunamathuba athile atholakalayo ezingeni lendawo. Ngisho ukuthi amawebhusayithi amaningi kahulumeni wasekhaya asebenzisa izinkampani zezinkampani ukwenza ukukhuthazwa kwe-intanethi ezinkampanini zesifunda ngaphakathi kwendawo yabo. Amakhomishana ohulumeni basekhaya mhlawumbe indlela elula futhi esheshayo yokubamba ezinye izinto ezingezansi ezinamandla ezikhomba kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi.
Ezemfundo (University / College) Amakhasi
Ingxenye yengonyama yamabandla afundisayo athembekile ukuthi amawebhusayithi azo ama-DA angama-90-95 amaphuzu (asekelwe ekucwaningweni kwakamuva). Kodwa into eyinselele kunayo yonke ukuthola ukuthola inhloso efanele yokufinyelela. Okokuqala, zama ukubenza babe nomusa - thola abantu abalungile obaziyo njengabafundi bokuqala noma abasebenzi. Ukucabangela ukuthi amanyuvesi namakholeji bahlale bezimisele ukubonisa, sebenzisa ukuze kuzuze - bazinikele nje izindaba zempumelelo zangempela, izindlela ezinhle zomsebenzi, noma izingxoxo ezishisayo abafuna ukuzibona, ngesikhathi esifanayo ukuvuselela iphrofayli yakho ephezulu ye-backlink nge-backlink umbhangqwana wezixhumanisi ezisanda kudalwa ngokubuya. Okungeziwe - ukuthola lawo backlink ayigugu ngokusebenzisa amakhasi enyuvesi noma esikoleni samabanga aphezulu, usebenzisa ngokuzenzakalelayo elinye ithuba lokukhuluma igama lakho lebhizinisi noma uthole ukuvezwa okubanzi embonini yenkampani yakho kanye nemakethe yemakethe.
Uma kungekho okusizayo, nansi enye indlela ehlukile yokusingatha ukufinyelela okulungile namayunivesithi noma ezinye izikhungo zezemfundo - okusebenza ngempela ekuzuzeni imibhangqwana yalezi zixhumanisi eziyigugu. Konke okudingayo ukuthi ube nomkhiqizo noma isevisi efanelekile kubafundi bendawo, noma abasebenzi. Vele uzame ukunikela, isibonelo, ikhodi eyisaphulelo ekhethekile. Ngesikhathi esifanayo, lokho kungaba yindlela enhle yokwenza amasheya amaningi, ukuhola, ukubhalisa nokukhulunywa kumithombo yezenhlalo - ngaphandle kwezinhloso zethu zokuthola ukuxhumana ngokuyinhloko. Kodwa-ke, phawula ukuthi ukuze uphumelele kule nqubo inkampani yakho noma iphrojekthi yebhizinisi kuyodingeka ukuze unikeze into engathengwa noma ilayishwe ku-intanethi Source .